भूकम्प दोहोरियो भने काठमाडौंमा कति क्षति होला ? – Bisal Chautari
भूकम्प दोहोरियो भने काठमाडौंमा कति क्षति होला ?
- ३ फाल्गुन २०७४, बिहीबार १०:५३ मा प्रकाशित
How much damage would be if the earthquake was repeated
काठमाडौँ , २०७४ फाल्गुन ३ बिहिबार । तीन बर्षअघि गोरखा केन्द्रबिन्दु भएकर गएको ७।८ रेक्टर स्केलको भूकम्प दोहोरिए राजधानी काठमाडौंमा मात्र ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो भूकम्पले २२ हजारभन्दा बढी मानवीय क्षति हुने सरकारी अध्ययनको दाबी छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भूकम्प विपद जोखिम मूल्याकंन परियोजनाले जापानी सहयोग नियोग९जाइका०सँग मिलेर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले मध्य नेपालको दक्षिण भागलाई केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गए काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २२ हजार १ सय ८० जनाको ज्यान जाने देखाएको हो ।
तीन बर्षको समय लगाएर गरिएको अध्ययनअनुसार यो क्षमताको भूकम्प दाहोरिए काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ८६ हजार ८ सय ६० जना घाइते तथा ११ लाख ९६ हजार विस्थापित हुने उल्लेख छ । यसअघि पनि विभिन्न दातृ संस्थाहरुले काठमाडौं भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै आएका छन् ।